फेरि काठमाडौंका अस्पतालहरूमा बढ्न थाले कोरोना संक्रमित, चिकित्सक भन्छन्- मृत्युदर बढ्नसक्छ :: विवेक राई :: Setopati
नेपालमा कोरोना भारइसको नयाँ अर्थात 'यूके भेरियन्ट' फैलिरहेको बताइँदा अस्पतालमा भर्ना हुने संक्रमितको संख्या पनि बढेको छ।
दश दिनअघि मात्र टिचिङ अस्पतालमा एक दुई जना संक्रमित भर्ना भएकोमा अहिले अस्पतालमा भर्ना हुने संक्रमितको संख्या २१ पुगिसकेको छ। जसमा तीन जना आइसियूमा रहेको अस्पतालका कोभिड संयोजक डा. सन्तकुमार दासले जानकारी दिए।
'अहिले जम्मा २१ जना संक्रमित भर्ना हुनुहुन्छ। दश दिनदेखि भर्ना हुने संक्रमित बढिरहेको छ। त्यो भन्दा अगाडि एकदुई जना मात्र थिए। धेरै समय त सून्य पनि थियो,' डा. दासले भने।
भर्ना भएका नयाँ संक्रमितमध्ये धेरैजसो २० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका रहेको बताउँदै उनले सबैजना हाल काठमाडौंमै बस्दै आएकाहरू बताए।
नयाँ संक्रमितमा देखिएका स्वास्थ्य समस्या पहिलेको भन्दा फरक रहेको पनि डा. दास बताउँछन्। उनले भने, 'पहिलेको संक्रमितहरूमा ज्वरो बढी हुन्थ्यो, निमोनिया हुन्थ्यो। अहिलेको संक्रमितहरूमा निमोनियासँगै कलेजो, मृगौलामा समस्या भएका धेरै हुनुहुन्छ।'
संक्रमण दर बढ्दै गएसँगै भर्ना हुने संक्रमित बढ्नसक्ने ठानेर अस्पतालले कोभिड बेड क्षमता विस्तार गरिरहेको छ। दासका अनुसार एक हप्ताअघि मात्र ३५ बेडको कोभिड वार्ड सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
तिहारपछि कोभिड संक्रमण दर घट्दै गएको र भर्ना हुने संक्रमित पनि निकै कम भएपछि अस्पतालले यसअघि सञ्चालन गरेको कोभिड बेडलाई ननकोभिड बेड बनाएको थियो।
'बीचमा कोभिड विरामी पनि कम भएको र ननकोभिड विरामीलाई उपचार गर्न समस्या परेपछि कोभिड बेडलाई ननकोभिड बनाएका थियौं। तर अहिले संक्रमितहरू बढेकाले फेरि बेडहरू बिस्तार गरिरहेका छौं,' उनले भने।
अहिले अस्पतालमा ६८ क्षमताको कोभिड वार्ड रहेको उनले बताए। जसमा १२ वटा आइसियू छन्। कोभिड बेड थप विस्तार गर्नेबारे छलफल अगाडि बढेको डा. दास बताउँछन्। उनले अस्पताल भर्ना हुने संक्रमित संख्या बढ्ने बताउँदै भने, 'जुन हिसाबले केस बढिरहेको छ, त्यो हिसाबले अस्पताल भर्ना हुने विरामी बढ्छ। एउटा 'वेभ' त आउँछ।'
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पनि दुई सातादेखि भर्ना हुने संक्रमित बढ्दै गएको छ। अहिले २४ जना संक्रमित भर्ना गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले जानकारी दिए।
'अहिले २४ जना संक्रमित भर्ना हुनुभएको छ। जसमा १८ जना आइसियूमा हुनुहुन्छ र पाँच जनालाई भेन्टिलेटरको साहयता दिइएको छ। बाँकी पाँच जनालाई विशेष आइसोलेसन र एक जनालाई इमर्जेन्सीमा राखिको छ,' उनले भने।
गएको २४ घण्टामा मात्र पाँच जना संक्रमित भर्ना भएका छन्। यसरी नै संक्रमित बढ्दै गए ननकोभिड वार्डलाई बन्द गरेर कोभिड वार्ड चलाउनुपर्ने अस्पतालले जनाएको छ।
यसरी नै नयाँ भेरियन्ट बढ्दै गए स्थिति जटिल हुनसक्ने डा. राजभण्डारी बताउँछन्। 'नयाँ भेरियन्ट भित्रिएको एक महिना भयो। यसले सबै उमेर समूहका मानिसलाई आक्रमण गर्छ। त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गर्न नसके स्थिति गाह्रो हुनसक्छ,' उनले भने, 'मृत्युदर नै पहिलेको भन्दा बढ्नसक्छ।'
बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा पनि पछिल्लो दश दिनयता भर्ना हुने कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको अस्पतालका प्रवक्ता डा. प्रविन नेपालले जानकारी दिए।
'सबैभन्दा कम हुँदा हामीसँग दुई जना संक्रमित हुनुहुन्थ्यो तर दश दिन जति भयो संक्रमित बढ्न थालेको। अहिले २६ जना भर्ना हुनुहुन्छ। जसमा १० जना आइसियूमा हुनुहुन्छ,' उनले भने।
अहिले प्रत्येक दिन नै भर्ना हुने संक्रमितहरू बढिरहेको अस्पतालले जनाएको छ। डा. नेपालका अनुसार अहिले दैनिक औसत तीनदेखि चार जना संक्रमित भर्ना भइरहेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समेत नयाँ भेरियन्ट फैलिँदै गएको भन्दै थप सतर्कता अपनाउन भनेको छ। साथै मातहतका सबै सम्बन्धित निकायहरूलाई परीक्षण र निगरानी बढाउन पनि भनेको छ।
नयाँ भेरियन्ट फैलिनसक्ने भन्दै मन्त्रालयले ठूला सहरका विद्यालयहरू बन्द गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न भनी प्रस्ताव गरेको छ। तर उक्त प्रस्तावबारे सिसिएमसीले अहिलेसम्म ठोस निर्णय गरिसकेको छैन।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २९, २०७७, ०३:३९:००